Radiation Safety Division – DAE Myanmar
(1) Carrying out measures for protection of radiation workers, people and the environment from harmful effects of nuclear and ionization radiation;
(2) Issuing Licenses after verifying compliance with the safety requirements of Radioactive Materials and Radiation Apparatus for safe use of radiation hazards carried out by the Inspectors of the Department;
(3) Dissemination of radiation knowledge to the public;
(4) Coordination with relevant institutions in radiation emergency programs;
Radiation safety Division issue the licenses for the import and export of Radioactive Materials and Radiation Apparatus in accordance with IAEA guidelines. In order to ensure the safety of the workers and the public, licenses shall be issued after verifying compliance with the basic requirements of the IAEA safety Standards and guidelines carried out by the Inspectors of the Department.
Import, re-export, Prior Permission and registration of imported Radioactive Materials and Radiation Apparatus are being done by online. A hybrid system is being used for applyingalicense because of necessary to inspect whether the radiation safety measure is carried out or not.
The online process of applying foralicense are as follows:
(a) To get application Forms, visit to this website (daemyanmar.com) and downloaded the Application Forms;
(b) Those who want to apply foralicense should contact the Division of Radiation Protection first and then pay the license fee to the bank.
(c) Manual payment to the Department Account through Myanma Economic Bank and Bank Slip (drawing remittance) must be submitted online for proof of payment to the Department.
(d)License application together with the required documents must be submitted to the Department and after scrutinizing the documents, issue the license in accordance with the procedures.
(e) Sending the license to the applicant through department’s email.
Students from undergraduate / postgraduate courses are delivered practical lessons on radiation protection related subject.
Radiation Safety Division provides annual training to trainees from the fourth year (imaging technology) of the Military Institute of Nursing and Paramedical Sciences(MINP) and the first year students of the Master of Science (Imaging Technology) to improve radiation safety and awareness of safe handling of Radiation Apparatus and to protect radiation hazards. Knowledge sharing were made occasionally aspect of radiation protection to the member from Customs Department and the Myanmar Police force (Criminal Investigation Department).
The activities of the department are launched in newspapers to inform the public and public awareness are being made on the DAE website (https://www.daemyanmar.com/) and on social media.
The Atomic Energy Law 8 June 1998.
1. Application PROCEDURE English
2. Application PROCEDURE Myanmar
3. FORM-DAE-1 (12.10.21) To apply Reg
4. FORM-DAE-3 (12.10-21) To apply License (New, Sell…..)
5. FORM-DAE-5 (12-10-21) To apply Prior
6. Standard Operating Procedure for Inspection of Radiation Sources
To apply foralicense online, please contact:
– Visit to the :www.daemyanmar.com
– Phone number : 95-9268411002
– Viber :95-9268411003
– email Address : [email protected]
123 Nat Mauk Street ၊ Yangon
Fax: + 95-67-3-404288, + 95-1-545065
Phone: + 95-67-3-404277, + 95-1-5426261
(၁) ဓာတ်ရောင်ခြည်လုပ်သားများ၊ လူနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် နျူကလီးယားနှင့် အိုင်းယွန်းဖြစ် ဓာတ်ရောင်ခြည်ဘေးအန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးစေရေးအစီအမံများ ချမှတ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၂) ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်းများနှင့် ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာများကို ဓာတ်ရောင်ခြည် ဘေးအန္တရာယ်မှ လုံခြုံစိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် စစ်ဆေးပြီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါက အသုံးပြုခွင့် လိုင်စင်များထုတ်ပေးခြင်း၊
(၃) ဓာတ်ရောင်ခြည်ဆိုင်ရာ အသိပညာများကို ပြည်သူလူထုအား ဖြန့်ဝေပေးခြင်း၊
(၄) ဓာတ်ရောင်ခြည်ဆိုင်ရာ အရေးပေါ်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်များတွင် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
၁။ ဓာတ်ရောင်ခြည်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဌာနသည် ပြည်ပမှတင်သွင်းသော သို့မဟုတ် ပြည်ပသို့ပြန်ပို့သော ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်းများနှင့် ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာများ အတွက် IAEA ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ ဓာတ်ရောင်ခြည်လုပ်သားများနှင့် ပြည်သူများအား ရောင်ခြည်အန္တရာယ် လုံခြုံစိတ်ချနိုင်ရန် အတွက် မိမိတို့ဌာနမှတာဝန်ရှိသော စစ်ဆေးရေးမှူးများက ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်းများနှင့် ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာများ အသုံးပြုသော လုပ်ငန်းခွင်များသို့ သွားရောက်စစ်ဆေးပြီး IAEA မှချမှတ်ထားသော သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါက အသုံးပြုခွင့်လိုင်စင်ချပေး လျက်ရှိပါသည်။
တင်သွင်းခြင်း၊ ပြန်လည်တင်ပို့ခြင်း၊ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် ပြည်တွင်းသို့ ရောက်ရှိလာသော ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်းများနှင့် ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာများကို မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးခြင်း တို့ကို Fully Online စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက် ပေးနေလျက်ရှိပြီး၊ အသုံးပြုခွင့်လိုင်စင်ချထားပေးရန် လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် ဓာတ်ရောင်ခြည် အန္တရာယ် ကင်းရှင်းအောင်ဆောင်ရွက်ထားမှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သောကြောင့် Hybrid စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေး နေပါသည်။
လိုင်စင်လျောက်ထားခြင်းတို့အား Online မှဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
(က) လျှောက်လွှာများအား www.daemyanmar.com တွင် download ဆွဲ၍ ရယူစေခြင်း၊
(ခ) လိုင်စင်လျောက်ထားလိုသူများမှ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကာကွယ်ရေးဌာန သို့ဆက်သွယ် ပြီးမှသာ ဘဏ်သို့ လိုင်စင်ကြေးကို ပေးသွင်းဆောင်ရွက်‌စေခြင်း၊
(ဂ)မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ရှိ ဌာန Account သို့ ငွေလွှဲစနစ်ဖြင့် Manual ငွေပေးချေပြီး ငွေပေးချေမှု အထောက်အထားအား Online မှ တင်ပြ လျှောက်ထားစေခြင်း၊
(ဃ) လိုအပ်သောစာ ရွက်စာတမ်များကိုတစ်ပါတည်းပူးတွဲ၍ လျှောက်ထားစေပြီး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး လိုင်စင်ချထားပေးခြင်း၊
(င) ချထားပေးသောလိုင်စင်အား လျောက်ထားသူထံသို့ Online မှ ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ဘွဲ့ကြို/ဘွဲ့လွန် သင်တန်းများမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ဓာတ်ရောင်ခြည် ကာကွယ်ရေး ဆိုင်ရာသင်ခန်းစာများကို စာတွေ့လက်တွေ့ သင်ကြား ပို့ချ ပေးလျက်ရှိပါသည်။
၃။ ဓာတ်ရောင်ခြည်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဌာနသည် ဓာတ်ရောင်ခြည်ကာကွယ်ရေးနှင့် ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာများကိုင်တွယ်အသုံးပြမှုအတွက် လုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိစေရန်နှင့် အသိပညာတိုးပွါးနိုင်ရန် တပ်မတော်သူနာပြုနှင့် ဆေးဘက်ပညာသင်တက္ကသိုလ်၏စတုတ္ထနှစ် (ပုံရိပ်ဖော်နည်းပညာ)မှ သင်တန်းသားများနှင့် မဟာသိပ္ပံပထမနှစ်(ပုံရိပ်ဖော်နည်းပညာ)မှ သင်တန်းသားများအား နှစ်စဉ် သင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိပါသည်။ ထို့အတူ အကောက်အခွန် ဦးစီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ အထူးစုံထောက်သင်တန်းသားများအားလည်း ဓာတ်ရောင်ခြည်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာဗဟုသုတ များအားအခါအားလျော်စွာ ပို့ချပေးလျက်ရှိ ပါသည်။
၄။ ဌာန၏ ဆောင်ရွက်ချက်များအား အများပြည်သူ သိရှိစေရန် အတွက် သတင်းစာများတွင် ထည့်သွင်းခြင်း၊ DAE website (https://www.daemyanmar.com/) နှင့် လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာများတွင် ဖော်ပြ၍ အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
အဏုမြူစွမ်းအင်ဥပဒေ ၁၉၉၈ခုနှစ် ၊ ဇွန်လ(၈)ရက်
(၁) လျှောက်လွှာတင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (အင်္ဂလိပ်)
(၂) လျှောက်လွှာတင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (မြန်မာစာ)
(၃) FORM-DAE-1 (12.10.21) မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရန်
(၄) FORM-DAE-3 (12.10-21) လိုင်စင်လျှောက်ထားရန် (အသစ်၊ အရောင်း…..)
(၅) FORM-DAE-5 (12-10-21) ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားရန်
(၆) ဓာတ်ရောင်ခြည်ပင်ရင်းများအတွက် စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာစံလုပ်ထုံးလုပ်နည်း
လိုင်စင်လျောက်ထားခြင်းတို့အား Online မှဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါအတိုင်း ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
– လျှောက်လွှာတင်ရန် [email protected]
၁၂၃၊ နတ်မောက်လမ်း၊ ရန်ကုန်
ဖက်စ်: +၉၅-၆၇-၃-၄၀၄၂၈၈ , +၉၅-၁-၅၄၅၀၆၅
ဖုန်း : +၉၅-၆၇-၃-၄၀၄၂၇၇, +၉၅-၁-၅၄၆၂၆၁
ပုံ(၁)ဓာတ်ရောင်ခြည်ဆေးကုဌာန ၊အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး(ကုတင်၁၀၀၀)၊ နေပြည် တော်တွင် အဏုမြူစွမ်းအင်ဌာနနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဏုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီတို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ဓာတ်ရောင်ခြည် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုရှိမရှိစစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေပုံ
ပုံ(၂) ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် ဓာတ်ရောင်ခြည်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်း များဆောင်ရွက်နေပုံ
ပုံ(၃) ရောဂါရှာဖွေရေးယာဉ်၊ မိုးသီးဆေးရုံ၏ဓာတ်ရောင်ခြည်စက်မှ ဓာတ်ရောင်ခြည် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုရှိမရှိစစ်ဆေးနေပုံ
ပုံ(၄) အမှတ် (၂) တပ်မတော်ဆေးရုံ(ကုတင်၅၀၀) ရှိ CT စက်အားစစ်ဆေးနေပုံ
ပုံ(၅) အမှတ် (၂) တပ်မတော်ဆေးရုံ(ကုတင်၅၀၀) ရှိ CT စက်ခန်း ဓာတ်ရောင်ခြည်ဖြာ ထွက်ခြင်း ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးနေပုံ
ပုံ(၆)အမှတ် (၂) တပ်မတော်ဆေးရုံ(ကုတင်၅၀၀) ရှိ CT စက်ခန်း၏ Control ခန်းတွင်း ဓာတ်ရောင် ခြည်ဖြာထွက်ခြင်းရှိ/မရှိ စစ်ဆေးနေပုံ
ပုံ(၇) ရေနံတွင်းတူးလုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြုမည့် ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်းများသယ်ဆောင်ရာတွင် ဓာတ်ရောင်ခြည်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအစီအမံများဆောင်ရွက်ထားမှုအားစစ်ဆေးရေးဆောင်ရွက်နေပုံ
ပုံ(၈) Schlumberger Ltd. ၏ ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းသည့် သိုလှောင်ကန်အား ဓာတ်ရောင်ခြည် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုရှိမရှိစစ်ဆေးနေပုံ
ပုံ(၉)မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ အထူးစုံထောက်သင်တန်းသားများ အားလည်း ဓာတ်ရောင်ခြည် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာစာတွေ့သင်ကြားနေပုံ
ပုံ(၁၀)မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ အထူးစုံထောက်သင်တန်းသားများ အားလည်း ဓာတ်ရောင်ခြည်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာလက်တွေ့သင်ကြားနေပုံ